Ch 7 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 7 Luke
7:1 Ary rehefa vita ny teniny rehetra teo anatrehan'ny olona, dia niditra tao Kapernaomy.
7:2 Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray efa ho faty, noho ny aretina. Ary izy malalanay azy.
7:3 Ary rehefa nahare momba an'i Jesosy, dia naniraka loholon'ny Jiosy azy, mangataka azy, ka mba ho avy ka hahasitrana ny mpanompony.
7:4 Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy, dia nangataka azy fatratra, nanao taminy hoe:: "Mendrika fa tokony hanome izany ho azy.
7:5 Satria tia ny firenentsika, ary efa nanao ny synagoga ho antsika. "
7:6 Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary raha tao amin'ny ankehitriny tsy lavitra ny trano, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena Azy, nanao hoe:: "Tompo ô, aza manahirana ny tenanao. Fa tsy miendrika hidiranao ao ambanin'ny tokony tafon-tranoko aho.
7:7 Noho io, Izaho koa tsy mihevitra ny tenako miendrika manatona Anao. Fa mitenena ihany ny teny, ary ny mpanompoko dia ho sitrana.
7:8 Fa izaho koa mba lehilahy napetraka eo ambany fahefana, manana miaramila eo ambany ahy. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray, 'Mandehana,'Ary dia mandeha izy; ary ny anankiray, 'Avia,Dia avy izy; ary amin'ny andevolahiko, Izao no ataovy,', Dia manao izy. "
7:9 Ary rehefa nandre izany, Gaga i Jesosy. Ary nitodika tamin'ny vahoaka nanaraka azy, hoy izy:, "Amen Lazaiko aminareo, na dia teo amin'ny Israely aza no hitako finoana lehibe toy izany. "
7:10 Ary ireo izay efa nalefa, eo niverina tao an-trano, hita fa ny mpanompo, izay efa narary, nila ho salama.
7:11 Ary nony afaka izany, dia nankany an-tanana, izay atao hoe Naina. Ary ny mpianany, ary be dia be ny vahoaka, nandeha niaraka taminy.
7:12 Avy eo, rehefa manakaiky ny vavahadin'ny tanàna, indro, ny maty ny olona dia nentina nivoaka, izay zanakalahy tokan'ny reniny, ary izy maty vady. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy.
7:13 Ary nony efa nahita ny Tompo azy, rehefa nifindra ny famindram-po noho ny aminy, dia nanao taminy hoe:, "Aza mitomany."
7:14 Ary nanatona izy ka nanendry ny tranovorona. Ary ireo izay nitondra azy nijanona. Ary hoy izy:, "Tovolahy, Lazaiko aminareo, mitsangàna. "
7:15 Ary ny maty tanora niarina sady niteny. Ary dia natolony tamin-dreniny.
7:16 Dia raiki-tahotra ny rehetra. Dia nankalaza an'Andriamanitra, nanao hoe:: "Fa Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika,"Ary, "Fa Andriamanitra efa nitsinjo ny olony."
7:17 Ary izao teny izao momba azy nivoaka nankany Jodia rehetra sy ny rehetra manodidina.
7:18 Ary ny mpianatr'i Jaona nilaza taminy ny amin'izany zavatra rehetra izany.
7:19 Ary Jaona niantso ny mpianany roa lahy, Ary naniraka azy ho any amin'i Jesosy, nanao hoe:, "Hianao va Ilay ho avy, sa tokony hiandry ny hafa?"
7:20 Fa nony hitan'ny lehilahy tonga tao aminy, hoy izy ireo: "Jaona Mpanao-batisa naniraka anay hankatỳ aminao, nanao hoe:: 'Hianao va Ilay ho avy, sa tokony hiandry ny hafa?'"
7:21 Ary tamin'izany ora izany, dia nahasitrana olona maro tamin'ny aretina sy ny ratra sy ny ratsy fanahy; ary ny maro tamin 'ny jamba, nomeny fahitana.
7:22 Sy ny fandraisana andraikitra, dia hoy izy taminy: "Mandehana ianareo, ka ambarao amin'i Jaona izao renareo sy hitanareo: mahiratra ny jamba, ny mandringa; diovina, ny boka, malady ny marenina, hitsangana ny maty, ny mahantra dia Evanjely tsy.
7:23 Ary sambatra izay tsy tafintohina naka ahy. "
7:24 And when the messengers of John had withdrawn, he began to speak about John to the crowds. "Inona no nalehanareo tany an-tany efitra ho any mba hijery? Volotara nohozongozonin'ny rivotra?
7:25 Ary inona no nalehanareo tany hizaha? A man clothed in soft garments? Indro, those who are in costly apparel and finery are in the houses of kings.
7:26 Ary inona no nalehanareo tany hizaha? mpaminany? tokoa, Teneniko anao, ary mihoatra noho ny mpaminany.
7:27 This is he of whom it is written: "Indro, Izaho maniraka ny Anjely eo alohanao ny tavanao, who shall prepare your way before you.”
7:28 Fa lazaiko aminareo, Amin'izay nateraky ny vehivavy, no one is greater than the prophet John the Baptist. But he who is least in the kingdom of God is greater than he.”
7:29 Ary rehefa nandre izany, all the people and the tax collectors justified God, by being baptized with the baptism of John.
7:30 But the Pharisees and the experts in the law despised the counsel of God concerning themselves, by not being baptized by him.
7:31 Ary hoy ny Tompo:: "Koa, ny inona no hanoharako ny olona amin'ity taranaka ity? Ary ny inona moa izy koa?
7:32 Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena, miresaka amin'ny iray hafa, ary nanao hoe:: 'Izahay nihira ho anao, ary ianao nefa tsy nandihy. Izahay nitaraina, nefa tsy mitomany. '
7:33 Fa tonga Jaona Mpanao-batisa, sady tsy nihinan-kanina na nisotro divay, ka hoy ianareo:, 'Manana demonia izy.'
7:34 Ny Zanak'olona tsy tonga, mihinana sy misotro, ka hoy ianareo:, 'Indro, maniry mafy foana ny lehilahy sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. '
7:35 Fa ny fahendrena dia hamarinin'ny zanany rehetra. "
7:36 Ary tamin'izany ny sasany Fariseo nangataka azy, ka dia mba mihinana aminy. Ary dia niditra tao an-tranon'i ny Fariseo, ary nipetraka nihinana.
7:37 Ary indro, nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, mpanota, nahita fa nipetraka nihinana izy nipetraka nihinana tao an-tranon'i ny Fariseo, ka dia nitondra alabastara feno menaka manitra kaontenera.
7:38 Ary nijanona teo aoriany, afa-tsy ny tongony, dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony, ary namaoka azy tamin'ny volon-dohany, dia nanoroka fatratra ny tongony, ary dia nanosotra azy tamin'ny menaka manitra.
7:39 Ary ny Fariseo, nanasa Azy, rehefa nahita izany, niteny tao am-pony, nanao hoe:, "Ity lehilahy ity, raha izy no mpaminany, Azo antoka hoe iza ary inona no karazana vehivavy ity, izay mikasika azy: fa mpanota io. "
7:40 Ary ho setrin'ny, Fa hoy Jesosy taminy, "Simon, Aho, manan-kolazaina aminao. "Dia hoy izy:, "Mitenena, Mpampianatra. "
7:41 "Nisy roa lahy nananan'ny mpampanàna vola nitrosa: ny iray nitrosa denaria diman-jato, ary ny iray kosa dimam-polo.
7:42 Ary satria tsy manana ny fahaiza-hamaly azy, Namela heloka azy ireo izy roa. Koa dia, amin'izay anankiray aminy tia azy bebe kokoa?"
7:43 Ho setrin'izany, Simon hoy, "Ataoko angamba fa Izy no ilay namoizany be." Ary hoy izy taminy:, "Efa nitsara tsara."
7:44 Ary Jesosy nitodika nijery an-dravehivavy, dia hoy izy tamin'i Simona: "Hitanao io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao. Nomenao ahy tsy misy rano hanasana ny tongotro. Fa izy kosa nanasa ny tongotro tamin'ny ranomasony, ary namaoka azy tamin'ny volon-dohany.
7:45 Nomenao tsy nanoroka ahy. Fa izy, hatramin'ny andro izy niditra, dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro.
7:46 Ianao tsy nanosotra diloilo ny lohako. Fa izy kosa nanosotra menaka manitra ny tongotro.
7:47 Noho io, Teneniko anao: voavela ny helokao be azy, satria izy no be fitiavana. Fa izay voavela tamin'ny kely, tsy tia. "
7:48 Ary izy nanao taminy hoe:, "Voavela ny helokao."
7:49 Ary niara-nipetraka nihinana teo aminy nilaza hoe-pony ireo, "Iza io, no mamela heloka?"
7:50 Ary hoy izy tamin-dravehivavy: "Ny finoanao no nitondra anareo famonjena. Mandehana soa aman-tsara. "